FANEHOAN-KEVITRY NY SMM : « Voahitsakitsaka ny lalàna… tsy azo ekena intsony izany » | NewsMada
FANEHOAN-KEVITRY NY SMM : « Voahitsakitsaka ny lalàna… tsy azo ekena intsony izany »
Manoloana ny fampitandremana nataon’ny filan-kevitra ambonin’ny mpitsara (CSM) ho an’ireo mpitsara, nitondrana fanazavana ny teo anivon’ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara. Ankoatra ny raharaha Razaimamonjy Claudine, natsikafon’izy ireo tamin’izany ny fampiasana ny fitsarana ho lasa fitaovana sy ny fandikan-dalàna marobe eto amitsika. Tranga izay tsy azo leferina intsony ka nahatonga ny SMM tsy hangina…
Vahinin’ny fandaharana « Anao ny fitenenana » omaly maraina ny tao onjam-peo Free FM ny filoha sy ny filoha lefitry ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara Fanirisoa Herinaivo sy Fanahimanana Tiaray. Novoaboasan’izy ireo tamin’izany ireo olana rehetra lalovan’ny fitsarana malagasy amin’izao fotoana izao. « Tamin’ny volana febroary lasa teo, vao nandray ny fitantanana ny sendika, isan’ny ady lehibe nataonay ny fitandroana ny tany tan-dalàna sy ny fahaleovantenan’ny fitsarana. Matetika loatra ny fanitsakitsahana ny lalàna ny eto amintsika ary misy olona mihevitra ny tenany ho tsy azo kitihina mihitsy ka minia manohy foana ny fomba fanaovany. Matetika loatra ihany koa ny fanitsakitahana ny fahaleovantenan’ny fitsarana. Tsy azo ekena intsony izany amin’ny maha sendikan’ny mpitsara anay”, hoy ny nambaran’i Fanirisoa Herinaivo. Notsindrian’ny SMM tamin’izany amin’ny maha sendika azy, fa isan’ny fiaraha-monim-pirenena izy ireo ary ny anjara asany voalohany amin’izany dia ny mampilaza ny mpitondra mikasika ny tsy fahatomombanan’ny fandehan-draharaha eo anivon’ny fitsarana. Manoloana ny resa-be miely amin’izao fotoana izao mikasika ilay raharaha Razaimamonjy Claudine, namafisin’ny SMM fa tsy io tranga io ihany no sahanin’izy ireo. Trangana tsy fanarahan-dalàna marobe ihany koa no iarahin’izy ireo akaiky amin’izao fotoana izao. “Tsy ny raharaha Razaimamonjy Claudine irery ihany no sahaninay, vakianay bantsilana avokoa izay tranga rehetra misy tsy fanajana ny lalàna… Io tranga io no isan’ny tsy azo leferina intsony ka nahatonga ny rehetra niteny”, hoy ny nambaran’I Fanahimanana Tiaray. Mikasika ny anjara andraikitry ny SMM kosa indray, notsiahivin’I Fanirisoa Herinaivo fa amin’ny maha sendika azy ireo dia sady mpitsara ihany koa izy. Amin’ny maha sendika dia manana fahalalahana miteny ny SMM ary mampahafantatra ny olona rehetra ny lalàna tokony hajaina sy ny olona tokony hampihatra izany. Etsy ankilan’izay anefa, tsy miditra amin’ny asan’ny fitsarana ny sendika, na amin’ny asan’ny mpanao fanadihadiana.
Tsy atao fitaovana politika
“Raha hiverenana, ny fitsidihana nataonay tao amin’ny HJRA dia tsy amin’ny maha-sendika fa iraka nampanaovin’ny teo anivon’ny fampanoavana. Amin’ny tsy maha-iray ny fampanoavana dia izay mpitsara rehetra miasa ao dia misolotena azy avokoa. Ankoatra izay, araka ny ambaran’ny fehezan-dalàna mifehy ny ady heloka, andininy faha-552, asan’ny mpitsara ny mitsidika isam-bolana ny toerana hitazomana ny voafonja. Tafiditra ao anatin’izany ny fitsidihina tampoka. Toy izany ny natao tetsy amin’ny hôpitaly HJRA”, hoy ny nambaran’I Fanirisoa Herinaivo. Araka ny nambaran’ity filohan’ny SMM ity, tsy nisy najaina ny lalàna taorian’ny fanapahan-kevitra nivoaka fa ampidirina am-ponja vonjimaika Razaimamonjy Claudine hatramin’ny nitondrana azy tao amin’ny hôpitaly HJRA. Tokony hiseho eny am-ponja aloha ilay olona mba ho jeren’ny mpitsabo manokana hamantarana na tena ilaina tokoa ny fandefasana azy any ivelany na tsia. Notsiahivin’I Fanirisoa Herinaivo hatrany fa marobe ireo olona mitady hampangina ity raharaha ity saingy mitsipaka avy hatrany ny fampiasana ny fitsarana ho fitaovana politika ny SMM. Teo ampamaranana, nanipy antso tamin’ireo birao mahaleotena misahana ny fanaraha-maso, izan’izany ny bianco, ny SMM mba hanome azy ireo izay raharaha mamaivay rehetra ahafahana manara-maso izay mikasa hitsoaka ny fitsarana.